Alaabada Isboortiga ee Dick ee Kaxeynta Warbaahinta Bulshada E-mayl | Martech Zone
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan helay tusaale weyn oo ah qaab aan caqli-gal ahayn oo loo isticmaalo suuq-geynta emaylka sidii waddo loo kaxeeyo taraafikada warbaahinta bulshada. Emailka ayaa ka yimid Alaabada Sportiga ee Dick.
Waxay ahayd emayl fudud oo si fiican loo qaabeeyey oo lahaa wicitaan aad u fudud oo ficil ah: Nagala soco barta Twitter-ka oo hel koodh qiimo dhimis gaar ah:
Maxay u fiicantahay
Dick wuxuu qabtay shaqo wanaagsan oo ah adeegsiga aalad dhaqameed, suuq geyn emayl, si uu ugu wado taraafikada mid kamid ah aaladaha cusub ee warbaahinta bulshada. Maxay dad badan oo suuqyadu iska indhatirayaan waa in helitaanka joogitaan wanaagsan ee warbaahinta bulshada aysan ahayn kaliya sameynta boosteejo kasta oo laga sugayo dadku inay ku helaan. Xaqiiqdii waa inaad kaxaysaa taraafikada si dadka ay u bilaabaan inay kula macaamilaan! Fikrad fudud, waan ogahay, laakiin badiyaa waa mid la iska indhatiro markii la qeexayo istiraatiijiyaddaada bulsheed.
Sababta ay u shaqeyso:
Kaliya maahan dhiirigelin in la raaco Dick's Sporting Goods on Twitter, laakiin dalabku, oo ah mid gaar ah (ugu yaraan kuwa raacsan twitter-ka) ayaa kaa dhigaya inaad dareento inaad helayso wax aan cid kale haysan. Waxaad ku jirtaa barta 'Dick's Sporting Goods' ee Twitter-ka waadna ka faa'iideysan doontaa.
Waa iib jilicsan, maahan wax faragelin ah, mana u baahna ficil badan. Taasi waa wax ka badan hal - laakiin waad aragtaa waxa aan ku helayo.
Qaar badan oo ka mid ah caqabadihii soo jireenka ahaa waa la iga saaray si aan ugala qayb qaato ama uga iibsado Dick iyada oo la adeegsanayo istiraatiijiyaddan. Way fududahay in la raaco isku xidhka, ku dhufo raac oo hel koodhka qiimo dhimista oo hadda oo aan haysto koodh dhimis, talaabadayda xigta waa malaha websaydhkooda si loo arko haddii ay jiraan wax aanan ogeyn oo aan u baahanahay illaa aan ka haysto cudurdaarkaas inaan u dukaameysto - waa mid cajiib ah!
Haatana waxay haystaan ​​laba warbaahin oo ogolaansho ku saleysan inay iiga iibiyaan at email iyo Twitter!
Tags: dhismaha kooxda
Raadinta, Meesha Labaad Waa Khasaaraha Koowaad
Nov 10, 2009 saacadu markay tahay 5:27 PM
Tani waa sababta suuqgeynta bulshada ay maalgashi ugu sameyso bulshooyinka bulshada leh waxyaabo / xalal waxtar leh iyo sidoo kale kaqeybgal iyo aqoonsi. In kasta oo "dhaqan ahaan" dalab emayl loo abuuray iyada oo ku saleysan waxa shirkaddu rabto inay iibiso, dadaal suuq-geynta bulshada ayaa diiradda saaraya ka-qaybgalka bulshada iyadoo la abuurayo dalabkan iyo sidoo kale kor u qaadistiisa.
Nov 11, 2009 saacadu markay tahay 2:37 PM
Si fiican ayaa loo yidhi Ben, aniguna waan oggolahay.